Dalxiiska Kooxda | Hongli
Shirkadeena waxay fiiro gaar ah siisaa kaliya dadaalka shaqaalaha laakiin sidoo kale shaqaalaha jirdhiska iyo maskaxda. Tusaale ahaan, shirkadayadu waxay qaban qaabin doontaa kulan isboorti si shaqaalaha loogu ogolaado jimicsi. Sannadkii hore, dhammaan shaqaaluhu waxay qayb ka qaataan isboorti. Intii lagu gudajiray kulamada isboortiga, waxaan sameynay dhowr munaasabad isboorti. Ka sokow tartanka orodada 4 * 50, waxaa sidoo kale jira dagaal, 100m orodka orodka iyo aqoonta aqoonta ee ku saabsan cayaaraha.
Marka laga reebo kulanka isboortiga, shirkaddeenna sidoo kale waxay abaabuli doontaa dalxiis kooxeed. Sanadkii hore, waxaan isla tagnay ZHOUSHAN. Kooxdayada, waxaa jiray 26 shaqaale ah oo qayb ka ahaa dalxiiska. Marka hore waxaan baska u raacnay zhoushan. Waxay qaadatay qiyaastii afar saacadood in halkaas la tago. Abbaaraha 1 saac, ayaan qado qaadanay. Qadada kadib, waxaan biloownay inaan fuulno buurta oo aan booqanno muuqaalka. 2 saacadood ka dib, waxaan helnay buurta dusheedii. Ka dibna, waxaan soo qaadnay sawirada. Nasashada nus-saac ayaanu ku laabannay.
Kadib, waxaan aadnay aag muuqaal ah oo ku taal Wu Shi Tang. Goobtan, waxaan ku aragnay dhagxaan waaweyn oo madow iyo iftiin leh. Waxaan sidoo kale kaxaynay doon si aan u booqano harada.
Habeenkii, waxaan helnay waqti aan ku qabanno howlo bilaash ah. Waxaan tagnay badda dhexdeeda oo aan ciyaarnay. Si kastaba ha noqotee, dhowr qof ayaa doortay inay booqdaan suuqa habeenkii. Markii loo eego shaqaalihii badda tegay, waxay ku ciyaareen ciid oo xitaa waxay isku dayeen inay qabsadaan daarta.
Maalintii xigtay, waxaan u baxnay buurta Putuo. Waxaan booqanaa dhagaxa matalaha sida dhagaxa oo kale sida wadnaha. Muuqaalka ugu mihiimsan waa macbadka iyo alwaaxida dameerka.
Booqashada kadib, waxaan dib ugu noqonay Hangzhou. Waa safar wanaagsan.